Error Card 4.3 SD h
Hordhac iyo isticmaalka kaarka XD
Card XD ama kaarka sawirka XD ahaa qalab lagu kaydiyo in uu ahaa huriye a. Waxa loo adeegsaday ee cams ka weyn in lagu soosaaray by Fuji iyo Olympus iyo dhererka waqtiga iyo ka dib ka mid ah horumarinta ee sayniska iyo farsamada ee card iyo aaladaha kaydinta la horumariyo ka dib gebi ahaanba bedelay card XD ah oo ay tahay in ay xusay in jirin cams cusub isticmaali technology taas oo aan la horumariyo ama u haayay tan iyo weligeedba. Kala duwan oo ka mid ah kaarka XD waa ka 16MB in 2GB oo si xaqiiqo ah waa mid aad u yar marka la barbar dhigo kaararka in lagu horumariyo maalmahan. Haddaba qaabab horjeeda ayaa suuqa soo qaaday uu duufaan iyo sabab la mid ah dadka ma sida mana iibsan xusuus kaydinta yar iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in kaararka XD haatan waxa ay foom classical ah meel lagu kaydiyo kari dacwayn ujeedooyin bandhig. Si kastaba ha ahaatee, waa in sidoo kale lagu xusay in dadkii weli waxay isticmaalaan kaararka XD ay u qabto xogaha iyo waa in la ogaadaa in dadka isticmaala qaba cams jir ah oo Samsung, Toshiba, Fuji iyo Kodak weli isticmaalaan gabal casriga ah si ay u hubiyaan in kaydinta bannaan waxaa ku riyaaqay. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka sidoo kale waxa ku adag inay dib u soo ceshano xogta haddii kaarka XD ee uu u kharribmay. Tutorial Tani ayaa sidaas daraaddeed la sameeyey si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah marka la eego software kabashada si user ah ka heli kartaa ugu fiican iyo technology ugu horumarsan ee Zaman casriga ah in la qaadi karaa si loo hubiyo in wax kaqabashada xogta ma aha arin oo dhan.
File Irrecoverable ka card XD
Waxaa jira dhowr sababood oo ay sabab u tahay taas oo file ah oo aan la soo kabsaday karaa kaarka XD ah. User The ma aha oo kaliya ayaa wajahaya arimaha arrintan la xiriira laakiin daqiiqado qaali ah ayaa sidoo kale xirran kaarka taasoo ku sii niyad u user. Ka dib markii ay tahay sababta ugu weyn ee marka ay timaado file irrecoverable ka card XD ah:
1. card XD waxaa ku kharribeen iyo files yihiin gudaha qufulan.
2. takrifal ee kaarka sababay musuqmaasuqa iyo files ma waxay yihiin hadda.
3. Sida teknoolajiyada cusub ee kaarka ayaa sidoo kale loo feydo kulka ama qoraxda iyo sabab la mid ah arrinta ka dhacay arrintan la xiriira.
4. card XD buuxsamay sawirada ayaa waxaa loo isticmaalaa in lagu dar labada sawirro badan ama xogta lagu daray iyo tirtiray.
5. kaarka XD ayaa waxaa loo isticmaalaa in lagu wareejiyo files si ay computer ka iyo inta lagu jiro ama si degdeg ah ka dib markii suuqa kala iibsiga kaarka la isla saaro booska kaarka keenaya xogta si aad u hesho kharribeen mar kensado kaarka loo isticmaalo mar.
6. nolosha qofka Kaarka XD ee la soo dhameeyay oo waxaa weli loo isticmaalay si loo hubiyo in xogta lagu daray iyo bedelay gal kaarka.
XD Card Soo Celinta la Software Recovery XD Card ugu wanaagsan
Wondershare Data Recovery Waa kan ugu khayr iyo software ugu dareen in la soo saaro si loo hubiyo in user helo adeegyada kabashada ugu fiican oo aan wax ka kaaftoomi iyo macluumaadka guud oo uu soo baxey barnaamij uu yahay mid waafaqsan shuruudaha user. About 550+ qaabab waxaa taageera Wondershare Data Recovery ah oo ay tahay in ka badan barnaamij kasta oo kale oo hada la shaqeeya. Laga soo bilaabo tirtirka shil si aan habboonayn u maaraysay kaarka XD ka Wondershare Data Recovery hubiyaa in user helo files ka soo kabsaday in waqtiga ay suurtogal tahay ugu yaraan iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user ayaa had iyo jeer lagu qiimeeyo adeegga ka badan u tartameen. Dhinaca kale ee horumarinta barnaamijka ie Wondershare hubiyo in user ka helo casriyaynta ammaanka uu nool yahay oo lacag la'aan ah iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user ee arrintan la xiriira ayaa kaliya in ay bixiyaan hal mar si aad u hesho orodka barnaamijka.
Geedi socodka la xidhiidha in hubiyaa in files waxaa soo kabsaday ayaa lagu sharaxayaa sida under:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html waa in la furay si ay u hubiyaan in user helo barnaamijka gal nidaamka by socda Dardar ah:
2. Nooca ama nooca file ah in uu u baahan yahay dib u soo celinta waxaa ka dibna in la soo xulay shaashadda soo socda oo u muuqata ka dib markii button xiga waxa ay ku sii adkeeyey,
3. Meesha nidaamka faylka badiyay markaas waa in la soo sheegnay:
4. kabsaday faylasha markaas waa in loo baaraa si loo hubiyo in kuwa loo baahan yahay waxaa lagu soo celiyay iyo kuwa kale ee ka hadhay sida ay yihiin. User wuxuu u baahan yahay in riix badhanka soo kabsadaan mar faylasha lagu soo xulay iyaga riixaya mid mid. Waxa kale oo dhameystiray habka loo user oo ay ku raaxaysan karaan xogta soo kabsaday:
Ma awoodo in uu dib u soo ceshano files isticmaalaya barnaamijkan
Barnaamijku waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo waxa ay taasi u hubiso in files badiyay gooba waqti lahayn gudaha iyo dalabaadka user ayaa sidoo kale la kulmay arrintan la xiriira. Maaddaama ay kiis kasta oo haddii user ee aan awoodin in ay dib u soo ceshano faylasha markaas sababta kaliya ee waa in barnaamijka ayaa lagu rakibay on drive isla meesha wax kaqabashada xogta loo baahan yahay iyo sababta ay isku files lumay ayaa lagu overwritten oo nasiib darro waa qalad ah oo aan la waayin si si loo hubiyo in files yihiin baxey.
Faa'iidada iyo khasaaraha isticmaalka XD Card
Ka dib markii qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah isticmaalaya kaarka XD ku fudayd iyo qanacsanaanta,
1. Waxaa loo qorsheeyay in la diido isticmaalka ee lakabka flash kala guurka iyo halkan waxaa kor u isticmaalka ee qaab-dhismeedka block qalab la mid ah kuwa loo isticmaalo magnetic disk.
2. kaararka XD ayaa waxaa loogu talagalay in hab lagu hubiyo in qalabka flash NAND waxaa si toos ah u heli jidaynayey user ay ku ciyaaraan la aljebra ah Boolean.
3. akhristayaasha card XD waa la bedeli karaa si loo hubiyo in NAND ee chips aan loo aabo yeelin la akhriyi jiray. Ka dib waa soo taxday ee adeegsiga kaar XD ah
1. xawaaraha wareejinta xogta waa mid aad u hooseeya iyo kaararka hadda bixiyaan 90% dheeraad ah oo xawaare xogta kala iibsiga marka la barbar dhigo kaarka XD dhaqanka
2. Kaarka xaqiiqo ah ayaa taako nolosha gaaban marka loo eego kaararka kale oo farsameeya isu ayaa xaqiijiyay experimentally yahay
3. Kaarka XD ma ay taageerayaan si ballaaran oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user kaarka tani ma ku raaxaysan karaan taageero software sida ay xafiiltamaan ee sida kaadhka SD sameeyo.
> Resource > Memory Card > Best XD Software Recovery Card